Ciyaaraha garoonka | Laga soo bilaabo Linux
Maxwell | | GNU / Linux, Ciyaaraha, Kuwa kale, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Markaan ka fikirno terminal amarrada, qoraalka, qoraallada, yutiilitiga barnaamijyada iyo waxyaabaha kaliya ee guruutyada bilaashka ah ee fahmi lahaa inta badan maskaxda ku soo dhaca. Laakiin wax walbaa kuma shaqeeyaan deegaan aan lahayn X, iyo sida aad adigu u maleynaysidba waxaa jira ciyaaro Tty, waa run inaysan iyagu lahayn muuqaallo layaableh sida cayaaraha maanta (midkoodna dhawaq ma leh), laakiin shaqadooda si wanaagsan ayey u qabtaan iyagoo naga dhigaya inaan waqti fiican qaadanno.
Si aan fikrad kaa siino, inta badan sawiradooda waa uun waraaqaha iyo calaamadaha qaab ASCII saafi ah, sanduuq yar oo dhibcahaaga leh, iyo mararka qaarkoodna midabayn fudud. Qaar ka mid ah ayaa si fiican u mari kara ciyaaro yaryar, halka kuwa kale ay ku adag tahay in yar oo qiyaasi.
Markaynu tixgelinayno waxa kor ku xusan, maxaynaan u eegi doonin iyaga?
2 dayax dalxiis
3 ascii booda
5 Maraq Dhagxaanta Dungeon
In yar ayaa laxiriiri kara aalado yar yar oo jumlad ah, iyo inbadan hadii ay kujiraan tty. Marka hore tani waxay u egtahay wax lala yaabo, laakiin waa dhagarta minigame-kan. Dhexdeeda waxaad ku tahay robot (#) iyadoo hawshu tahay inaad ka dhex raadiso mukulaal qarsoon dhowr shay, tan darteed waa inaad taataabataa oo aad eegtaa inay runtii bisad yihiin iyo in kale. Waxa ugu fiican ee tan ku saabsan ayaa ah in markii aad sameyso, ay soo ridayaan weedho qosol ama xoogaa dhib ah.
Roodhidan roodhida ah waxaa lagu qarxiyay godadka rasaasta!
Kumaa rabin inuu u safro Dayaxa Runtii qof walbaa wuxuu maqlay dayaxa caanka ah ee soo dagay 1966 iyo aragtidiisa badan ee shirqoolka ah. Kulankaan waxaan la wareegi doonnaa a baabuur dayax, iyada oo ujeedadu tahay in dayax gacmeed la dejiyo, boodboodka ayaan ka fogaan doonnaa inaan ka soo dhacno buuraha oo aan fulino himiladeenna.
Barafka iyo buuraha ayaa ah meesha ugu haboon ee lagu cibro qaato cirka, xitaa Terminalka. Minigame-kan yar waa inaan ku dadaalnaa inaan gaarno natiijo sare, oo sida magaceeda ka muuqdo, waxaan sameyn doonnaa inaan ku dadaalno inaan ka dhigno boodbooyin waaweyn bartamaha barafka. Waxeey heesataa 7 marxaladood iyo koob adduun, waxaan dooran karnaa dhowr tartame oo aan go'aamin karnaa xirfadahooda. Dhaqdhaqaaqa baraf dhacaya waa guul.
Ma waxaad moodeysay inaan seegi karin tetris?, Waa hagaag, maya. Dhammaanteenna waxaan horeyba u wada ciyaarnay mid ka mid ah jaallayaasheeda badan, iyo dabcan, waxaan sidoo kale haysannaa nooc loogu talagalay terminal-ka. Waxay leedahay ikhtiyaarka xulashada heerka aan rabno inaan ku bilowno, sida ugu fudud ee asalka ah.
Maraq Dhagxaanta Dungeon
Waxaa la yiraahdaa marka laga tago cadaabta qoto dheer, waxaa jira waxyaabo cajiib ah Crystal of Zot, shey leh awood aan la qiyaasi karin oo qarsoodi ah. Ciyaartan isdaba joog ah Shaqadeenu waa inaan u dhaadhacno sagxadda geed weyn oo ka mid ah 27 dabaq oo dhulka hoostiisa ah si aan u qabsanno oo aan ugu laabanno dusha sare, codadku way sahlan yihiin, miyaanay ahayn? Iyada oo leh nidaam fasal iyo xirfad, iyo dhib weyn, jawharaddan yar ee loo yaqaan 'terminal' waxay la tartami kartaa RPG casri ah.
Daawashada ciyaar khadka tooska ah ee gurguurta.
Iyada oo leh 24 jinsiyado kala duwan oo laga kala xusho, 5 hababka ciyaarta iyo casharro, ku dhowaad 27 shaqooyin kala duwan, 12 nooc oo sixir ah, ilaahyada iyo hubka; waxaan heysanaa fursado qoto dheer oo kala geddisan oo aan ku dhex mari karno godka halista ah ee si aan kala sooc lahayn loo soo saaray markasta oo aan bilowno ciyaar cusub. Waxay sidoo kale leedahay nooc garaaf ah oo loo yaqaan 'crawl-tiles'.
Waxaan sidoo kale awoodnaa ku ciyaar khadka tooska ah adoo adeegsanaya mid ka mid ah adeegeyaashooda adoo adeegsanaya ssh ama telnet, oo waxaad ku arki kartaa ciyaaraha ciyaartoyda kale waqtiga dhabta ah ama la duubay. Tusaale ahaan:
Ereyga sirta ah: Joshua
Waxay ku jirtaa horumar joogto ah waxayna leedahay bulsho aad u firfircoon, iyo sidoo kale tartamo. Waa wax aan la rumaysan karin?
Taasna waxaan ku soo gabagabeyneynaa dib-u-eegista yar ee ku saabsan cayaarahaan, xusuusnow in badankood ay ku jiraan keydka qaybintaada, taas oo fududeyneysa rakibiddooda, waa uun faro ku tiris iyaga ka mid ah.Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxeysateen sida ugu badan ee aan u aqriyay sidii aan sameeyay marka aad qorto, waxaan mar dambe aqrin doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Ciyaaraha garoonka
Tabaruc aad u fiican, qaar ma aysan ogeyn. Way ku habboon yihiin nidaamkayga iyada oo aan la helin X 😀 Qaar kale oo aad isku dayi lahaydna waa: nethack, 0verkill, vitetris, myman iyo ninvaders.
Oo sidee baan iyaga u rakibi? 🙁
Haddii aad isticmaasho Debian, Ubuntu ama wax kasta oo disto ah oo adeegsanaya xirmooyinka .DEB (sida kiisku yahay, waxaad isticmaashaa Mint) adoo adeegsanaya:
sudo ku habboon-hel rakibida GAME-NAME
Tusaale ahaan, si loo rakibo robotfindskitten waxaad gelisay:
sudo apt-hel rakib robotfindskitten
Soo dhawow Maxwell ????
Boostada wanaagsan hadda faahfaahsan wuxuu ku ciyaaray midda dayaxa aad baanna u qosolnaa markii gaariga / markabku burburo LOL !!!
Waxaan rajeyneynaa inaan aqrin doono inbadan oo ka mid ah qoraaladaada hahahahaha, maxaa yeelay tani waxay ahayd mid xiiso badan, ma aanan ogeyn mid ka mid ah ciyaarahan 😉
Runtu waxay ahayd waan ka labalabeynayay inaan diro maxaa yeelay waxaan moodayay inay u qaadanayaan inay yihiin wax aan qiimo badan lahayn, laakiin waan ku faraxsanahay inay ka heleen oo ay daabaceen.
Nah maxaad dhahdaa, ka waaban maysid ... waad dirtaa 😀
Xaqiiqdii waad arki kartaa tirakoobka maanta waxaadna arki doontaa inay tahay qodobka 2aad ee loogu akhris badan yahay 😉
Salaan iyo soo dhowow markale 🙂
Salaan! Qoraalkaagu waa wanaagsan yahay! Anigu waxaan ahay cayaaryahan waana jeclahay cayaaraha, laakiin qunsulka waa kuwa ugu fiican. Sii wad!
Taasi "Re Bueno" waxay u egtahay qof ka yimid Mexico ama Venezuela LOL !!!
Maya, waxaan ahay Cuba waxaanan ku faraxsanahay inaan mid noqdo. Had iyo jeer waxaan dhihi jiray "re" Hahahaha,
HAHAHAHA Waan ogahay inaad tahay haha, kaliya in aanan weligey arag qof halkaan ka dhahaya re 😀
Waad aragtay, anigu waxaan ahay qof gaar ah 😉
PS: elav badbaadi naftaada dhibaatada majete
Waad ku mahadsantahay aqrintaada, waan ku faraxsanahay inay ku caawisay.
hehe hada waxaan bilaabay inaan ciyaaro RPG Dungeon Crawl Stone Soup hehe, sidee u socotaa…. maxaa shaki ah .. Ciyaarahaasi waxay noqon doonaan Isbaanish ???
Hahaha, weydii NIN 😀 oo hadaad ku aqrin karto Isbaanish… oh si fiican, haa 😉
Nasiib darrose kulligood waxay ku wada qoran yihiin Ingiriisiga, ha aaminin inay igu kalliftay wax aan ku qaato khiyaanada aniga oo gurguurta. Waxaan kugula talinayaa inaad marka hore u marto casharka si aad fikrad uga siiso sida ay wax u socdaan, iyo waliba tilmaamaha lagu barto amarrada aasaasiga ah.
Waxaan u maleynayaa in vim-tetris ay ka fiican tahay midab kiiskan.
Macluumaad wanaagsan, hadda haddii la ciyaaro. xP
Si daacadnimo ah uma qiyaasi karo iyaga XD. Waxay noqon laheyd lagama maarmaan in la isku dayo 😉
Wanaagsan boostada hada waxaan bilaabay inaan ciyaaro Stone_soup waxay umuuqataa rajo. ; D
By the way ciyaarta waxay umuuqataa mid ay dhiiri galisay nethack mmm.
Xaqiiqdii maya, Cawl Dhagaxa Cawl waa wax ka yar ama ka yar nooca la hagaajiyay ee Cawlkii asalka ahaa. Dhamaantood waxay ku saleeyaan qaabkooda ciyaarta ugu horeysa ee nooceeda ah, "Rogue", isla mar ahaantaana tani waxay ku saleysan tahay ciyaarta Dungeons iyo Dragons.
Nethack lafteeda ayaa ah nooc ka soobaxay «Net», Nethack wuxuu leeyahay nooc kale oo la hagaajiyay oo la yiraahdo «Slash'em». Xoogaa wareer ah, sax?
uff Waxaan bilaabay inaan ciyaaro Cawl Stone Soup, iyo si daacad ah .. waa inaad noqotaa guru hahaha oo aad leedahay xasuus aad u weyn hehe wax walba waxaa lagu sameeyaa furayaal, mar hore ayaan laba jeer lumiyay qaar ka mid ah trolls bilowgii beginning. Hadday ahaan laheyd Isbaanish, waxay noqon laheyd guul weyn, hehe, maxaa yeelay waxay umuuqataa mid wanaagsan sidoo kale jilayaal iyo casharo kaladuwan oo wanaagsan ... .. goor dambe markaan helo madax deggan waxaan ku ridi doonaa jejej ,,, ,
Waxay leedahay xeelad, waxaan kugula talin lahaa inaad marka hore ku bilowdo tartamada fudud sida vampires, ghouls iyo spriggans. Vampires waxay badbaadi kartaa waqti dheer iyadoon dhiig la cabin, way u baxsan karaan sida fiidmeerta yar markay gaaraan heerka 3, ghouls waxay cunaan wax kasta, iyo spriggans yar waxay leeyihiin dheef-shiid kiimikaad aad u gaabis ah, aad ayey u dhaqso badan yihiin laakiin ma isticmaali karaan hub iyo hub.
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad kubilaabato xirfad sixir ah, sida transguting spriggan (iyagoo dhaqso badan waxay isticmaali karaan sixirkooda si dhaqso ah), vampire elementalist vampire, ama spriggan mage sun ah. Isku darka dambe ayaa ah mid dilaa ah, runti ciyaaryahanka shaashadda uu ka qaadayaa wuxuu sameeyaa gnolls oo dhan iyo ogres xasuuq uu ku sameeyo qoortiisa, maxaa yeelay "shucaaca sunta ah" iyo isku-darka "sunta sunta ah" waa dilaa.
Ama sida ugu fiican ee aad sameyn kartid aniga oo kale oo aad u siiso kuwaa bahallada farshaxanimada garaacis, kaliya suufiyayaashu waxay umuuqdaan xoogaa ciirsi la'aan markay tahay inay ka takhalusaan waxyaabaha sida wadaaddada orc ama kooxaha boqolleyda: S
Haddii aad aragto hay'ad sixir ah ama shaqaale oo jinsiyadaada raajada ahi kuma xuma sixirka, si xor ah u isticmaal. Waxaan kuu sheegi lahaa inaad akhriso wiki-ga, laakiin taasi waxay yareynaysaa soo jiidashadeeda.
Waad sheegi kartaa inay tahay ciyaarta aan ugu jeclahay, sax?
hehe way tusaysaa .. maanta si dagan ayaan u dhigay .. waxaanan u gudbin doonaa casharka marka hore si aan u fahmo waxa ku saabsan…. Ugu danbeyntii waxaan ahay taageere hee RPG, uma maleynayo in ciyaarta yar ay aniga igu adkaaneeyso hehe ..
Aad u fiican boostada. Waxaan isku dayi doonaa maraqa dhagaxa, fiiri sida ay wax u socdaan.
Ma aanan ogeyn inuu jiray RPG meesha lagu keydiyo ... in kasta oo aanan ahayn qof jecel noocaas ciyaaraha waxaan arki doonaa haddii halkan JC ay ku jirto meelaha loo yaqaan 'repos', waana wax aan ka shakisanahay maadaama aan xitaa la cusbooneysiinin marka loo eego Iceweasel waxaan shaki ka qabaa inay la socdaan kulamada hehehe
Si la yaab leh…. Kuwa JC repo ayaa si farxad leh u niyad jabiyey aniga iyo HADDII Dungeon gurguurashadu ku jirto meelaha kaydka ah, markaa waxaan ku sii dhowaanayaa inaan dabeecad ku abuuro Dungeon Crawl lol waxaan kuu sheegi doonaa "waaya-aragnimadayda" si aan u arko haddii aysan ku dhicin aad ayaan ugu adkaystay tan sida World of Warcraft, taas oo waagii aan arday ka ahaa UCI (Jaamacadda Cilmiga Kombuyuutarka) ay igu sigtay in aan lumiyo hehe.
Sideen u maamulaa ciyaaraha?
ayaa ah inaan kucusubnahay Linux-kan XD
Ku jawaab Seikon
Ku jawaab Tbzer
Wanaagsan, waxaan haystay waqti aan raadinayo ciyaaro loogu talagalay terminal ficil, iyo midabka, daanka ayaa iga dhacay. Hagaag, waligey malahayn TETRIS la'aantiis Xorg.
iyo "Gurguurasho" ma rumaysan karo. (kani waa inuu muujiyaa magaca xirmada, ciyaarta ka sokow)
tabaruc aad u fiican (iyo).
habka aan kuugu xiisay "GNUGO".
waa caajis, laakiin waxay kaa bixineysaa dhibaatada markaad gacanta ku soo uruurinayso kernel cusub 😛
Ku jawaab AlexLikeRock
Raxnye vazq dijo
Waxaan horey u soo dajiyay dhowr ciyaarood laakiin su'aasha aan qabo ayaa ah sida loo maamulo. Qof ma ka jawaabi karaa su'aashayda?
Ku jawaab Rahnye Vazq
Intel wuxuu sii xoojinayaa xiriirka ay la leedahay TDF iyo LibreOffice
TuxInfo 45 waa la heli karaa!